Ciidamada Nabadsugida oo dib ula wareegay Saldhiga Booliska Guriceel iyo xaalada oo degan - Jowhar Somali news Leader
Home News Ciidamada Nabadsugida oo dib ula wareegay Saldhiga Booliska Guriceel iyo xaalada oo...
Ciidamada Nabadsugida oo dib ula wareegay Saldhiga Booliska Guriceel iyo xaalada oo degan
Wararka ka imaanaya magaalada Guriceel ayaa sheegaya in Ciidamada Nabadsugida ee dowladda Federaalka ay goor dhow la wareegaan saldhiga Booliska degmada, kaddib markii Maleeshiyada Ahlusuna ay ka qabsadeen ciidan boolis ahaa oo horay u joogay saldhigga.
Ciidamada Nabadsugida oo ku hubeysnaa gaadiidka dagaalka, kana yimid bannaanka magaalada ayaa dagaal la galay maleeshiyo ka tirsan Ahlusuna oo ku sugnaa saldhigga, waxaana is rasaaseyn muddo kooban socotay la wareegay saldhigga Ciidamada NISA.
Illaa labo ruux ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen iska hor imaadka, halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen.
Rasaasta la is weydaarsanayay ayaa waxaa ka dhashay khasaare, iyadoo uu dab qabsaday goob ganacsi ku dhoweyd Saldhigga oo rasaasta ku dhacday, waxaana la arkayay uuro ka baxayay goobta.
Xaalada degmada Guriceel ayaa ah mid degan, waxaana bartamaha magaalada iyo hareeraha saldhigga isugu soo baxay boqolaal dadweyne.
Maleeshiyadii Ahlusuna ee dagaalka soo qaaday ayaa la sheegay inay isaga baxeen xaafadaha, lagana cabsi qabo inay soo rogaal celiyaan.
Dhinaca kale xaalada magaalada Dhuusamareeb ayaa ah mid degan, waxaana la maqlayaa rasaas goos goos ah, ciidamada dowladda Federaalka iyo kuwa Ahlusuna ayaa wax horumar ah ka sameyn dagaalka, marka laga reebo in goobaha ay ku sugan yihiin ka ridayaan rasaas culus.
Xaalada magaalada Dhuusamareeb iyo Guriceel ayaa saacadihii u dambeeyay noqotay mid dagaal, kaddib maalmo ay jirtay xiisad labada dhinac ee isku haya maamulka magaalooyinkaas u dhaxeeyay, waxaana la ogeyn xiisada dagaal halka ay saldhigan doonto, qoraalo labada dhinac ka soo baxay ayaa waxay midba midka kale ku eedeeyeen inuu dagaalka mas’uul ka ahaa.